Feo miavaka eo anivon’ny maro hafa
“Fa na mivily ho amin’ny ankavanana hianao, na mivily ho amin’ny ankavia, ny sofinao dia handre teny ao ivohonao manao hoe: Ity no làlana, ka andehano” Isa. 30:21
Eo anivon’ny korontanana avy amin’ny fampianaran-diso, dia mpitari-dalana sy ampinga ho an’ireo izay tsy nanohitra ny porofon’ny fahamarinana ny Fanahin’Andriamanitra. Mampangina ny feo hafa rehetra tsy avy Aminy, ilay fahamarinana sy fiainana Izy. Manome tombontsoa ny fanahy rehetra mba handre ny feon’Ilay Mpiandry tsara Andriamanitra, mba handray fahalalana momba an’Andriamanitra sy ny Mpamonjintsika. Rehefa mandray io fahamarinana io tahaka ny harena sarobidy ny fo, dia mitoetra ao anatintsika Kristy, ilay fanantenan’ny voninahitra, ary miantsoantso ny lanitra manontolo hoe:”Amena! Amena! Tena mila hery manavaon’ny Fanahy Masina isika. Tsy manam-potoana hiadian-kevitra amin’ny nofo aman-dra isika.
Mila ny fahazavana avy amin’Andriamanitra isika. Miezaka ny ho lasa ivon’ny hery miasa ho an’ny olony Andriamanitra dia tsy hahita izy ireo fa ny fileferana amin’Andriamanitra no hany fialofana azo antoka ho an’ny fanahy. Izany fahasoavana manova miasa ao am-pon’ny olona izany no hitarika ho amin’ny firaisam-po izay tsy mbola tanteraka hatrizao; fa ireo izay manahaka an’i Kristy dia hifanaraka amin’ny hafa. Ny Fanahy Masina no hametraka ny firaisam-po. “Izy hankalaza Ahy” Jao. 16:14. “Ary izao no fiainana mandrakizay, dia ny mahafantatra Anao, Izay Andriamanitra tokana sady marina, sy Jesosy Kristy, Izay efa nirahinao” Jao. 17:3. Mankalaza an’Andriamanitra ny Fanahy Masina rehefa maneho ny toetrany eo amin’ny olony Izy ka lasa iraketan’ny fitiavan’izy ireo ambony indrindra ary maneho ny toetrany eo amin’izy ireo Izy.
Mahita mazava tsara izy ireo fa tsy misy fahamarinana velively raha ety amin’izao tontolo izao afa-tsy ny Azy, tsy tanteraka raha ety amin’izao tontolo izao afa-tsy izay avy Aminy. Rehefa nirotsaka ny Fanahy Masina, dia ampoky ny fahazavana ny fiangonana, ary Kristy izany loharanom-pahazavana izany; eo amin’ny lela rehetra ny Anarany, mameno ny fo rehetra ny fitiavany. Ho to izany rehefa hohazavain’ny voninahitr’ilay anjely nidina avy any an-danitra ny tany rehetra (...)
Ho an’ny fiangonany ny fanomezana sarobidy sy feno ary mivatravatran’ny Fanahiny Masina, manodidina toy ny manda afo, ary na ny herin’ny helo aza tsy hahahresy azy; Mijery ny olony amin’ny fahadiovana tsy misy pentina sy fahatanterahana tsy misy kilema Kristy, tahaka ny fisasaran’ny fahoriany rehetra sy ny fitiavany ary fanampin’ny voninahiny - Kristy no ilay ivo lehibe ipariahan’ny voninahitra rehetra. HoM,1 Novambra 1893.